लिनक्स टकसाल बढी लोकप्रिय हुन्छ लिनक्सबाट
धेरै ब्लगहरूले यो खबर प्रतिध्वनि गर्यो र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। को रैंकिंग मा पहिलो पटक डिस्ट्रोकएक Ubuntu पहिलो स्थान उहाँबाट लिइएको छ र त्यो अपराधी भएको छ: लिनक्स मिन्ट.
विशेष गरी मलाई कुनै कुरा अनौठो छैन। यद्यपि यो तर्कसंगत छ कि तथ्या .्क डिस्ट्रोक ती सब भन्दा सटीक छैनन्, कम्तिमा यसले हामीलाई एक विचार दिन्छ जुन तपाईंको साइटमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको वितरणहरू हुन्, र डाटा अनुसार जुन देख्न सकिन्छ, months महिना अघि लिनक्स मिन्ट यो एक हो जुन धेरै भेटघाट गर्दछ।
लिनक्स मिन्ट मा जन्म एक वितरण हो 27 / 08 / 2006 कोडनेमको साथ एडा। मा यसको शुरुआत मा आधारित कुबन्टु डापर बिस्तारै यसले धेरै अनुयायीहरू अधिग्रहण गर्यो र त्यस पछि यो अन्तत: विकसित भएको छ। आज लिनक्स मिन्ट यसका धेरै स्वादहरू छन्:
लिनक्स मिन्ट (उबुन्टु / जीनोम)
लिनक्स टकसाल LXDE (उबुन्टु)
लिनक्स टकसाल केडीई (उबुन्टु)
LMDE जीनोम (डेबियन)
LMDE Xfce (डेबियन)
A LMDE सबै भन्दा माथि, यसले विशेष ध्यान दिइरहेको छ र अलि अलि यो यो यसको बहिनी बाट आधारित प्रयोगकर्ताहरू छिनिएको छ Ubuntu.
तर शीर्षकमा फिर्ता के लिनक्स टकसाल विश्वमै सर्वाधिक प्रयोग हुने GNU / Linux वितरण बन्न सक्छ?
म मध्यम वा लामो अवधि हो भनेर सोच्छु। जबकि Ubuntu आफ्नो निर्णय संग आलोचना हासिल, टंकशाला प्रयोगकर्तालाई रमाईलो अनुभव दिनको बारे मा बढी ध्यान दिन्छ क्लेमले आफ्नो पछिल्लो लेखबाट प्रदर्शन गरे। सिर्जना गर्नुहोस् एमजीएसई यो एक धेरै स्मार्ट निर्णय थियो र हामी परिणामहरू छिट्टै देख्नेछौं। समयले अन्तिम शब्द बताउनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » वितरण » लिनक्स टकसाल अधिक लोकप्रिय हुन्छ
ब्राजिलमा, यहाँ टकसालको बारेमा रिपोर्ट छ
लिंकको लागि धन्यबाद, यदि म पोर्तुगाली भाषा बोल्ने मेरो साथीले अनुवाद गर्दछु भने, यदि मँ यहाँ राख्छु भनेँ
अहो, के तपाईंलाई पोर्तुगाली पढ्न यति गाह्रो छ?
होईन, यो पढ्न मलाई यत्ति गाह्रो छैन, समस्या यो हो कि यदि मैले यो लेख यहाँ राखें भने म एक अनुवाद गर्न चाहन्छु कि यति ठिक र सही छ, र मैले बुझेको कुरा होइन।
😉 यो राम्रो छ कि तपाइँले साझेदारी गर्न चाहानुभएको जानकारीमा ध्यान दिनुहोस्।
पहिलो पटक? … त्यो होइन कि LM पहिले १ स्थानमा थियो?
हो, तर लामो समयको लागि होईन।
यो विचार गर्नुहोस् कि यो पहिलो र बढ्दो छ जब नयाँ संस्करण अझै आउँदैन, र यदि यो खबर आउँछ कि क्लेमले वाचा गरेको छ कि यो पक्कै गगनचुम्बी हुनेछ।
यस वितरणको कन्सोलमा कमाण्डहरू उबुन्टोको जस्तै हो?
डेबियन, Winbuntu, अधिकतम, LM, LMDE, ElementaryOS, सिडक्स, ड्रीमलिनक्स, आदि मा समान आदेशहरू प्रयोग गरिन्छ
कमाण्डहरू उबुन्टु, डेबियन, LMDE ... जसरी भए पनि उस्तै हो। सामान्यतया, GNU / Linux को लागी सबै कमाण्डहरु उस्तै हुन्छन्, केहि बाहेक केहि ओपनसस जस्तो डिस्ट्रोजमा फरक हुन सक्छ।
LinuxMint 12 RC अब MGSE र Gnome with को साथ डाउनलोड गर्न सकिन्छ http://t.co/xKz2Ocds
जोटाइरीलाई जवाफ दिनुहोस्
समाचारको लागि धन्यबाद। म यसमा नजर राख्छु।
मैले लिनक्स लिनक्समा भनेको भनेको उही कुरा।
म धेरै विश्वास गर्दैनन् ड्रोड्रोवाच कत्ति सम्मान गरिएको छ।
Ubuntu द्वारा क्र्यास? यो हुन सक्छ, किनभने तिनीहरूले लुसिद लिन्क्सदेखि नै गल्तीहरू गरिरहेका छन्, यदि उबन्टु पहिले जस्तो भए, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले डिस्ट्रो न बदल्ने सक्ने थिए (सायद म तिनीहरू मध्ये)
तर आउनुहोस्, यस ठाउँमा म परिवर्तन हुनेछैन
साथीहरू, यदि तपाईंलाई कहिले अनुवाद आवश्यक छ भने, मलाई सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्, म अनुवाद र व्याख्या गर्दै छु (म पहिले नै तेस्रो कक्षामा छु), त्यसैले तपाईंलाई अ English्ग्रेजी, फ्रान्सेली, जर्मन वा पोर्तुगाली, डॉनको साथ कुनै सहयोगको आवश्यक छ भने सहयोगको लागि सोध्न हिचकिचाउँदैन!
वाह महान, धेरै धेरै धन्यवाद 😀
म तपाईंलाई तपाईंको शब्दमा लैजान्छु, जब हामीलाई अनुवाद आवश्यक हुन्छ वा केहि यस्तो चीज हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं 😀
अभिवादन र धन्यवाद साँच्चै 😉
यो गर्न संकोच नगर्नुहोस्! म तपाईंलाई धेरै नै सम्भव भए मद्दत गर्न चाहन्छु! 😀
लिनक्स मिन्टले उबुन्टुबाट लिएको म ती प्रयोगकर्ताहरू मध्ये एक हुँ! हे हे प्रयोगकर्ताहरूलाई ध्यान दिने दर्शन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मलाई याद छ कि एक पटक मैले एउटा ब्लगमा पढें कि उनीहरूले एउटा कन्फरेन्समा क्यानोनिकलका मालिकलाई उसले गरेका कठोर परिवर्तनहरूको लागि हप्काए। श्री शटलवर्थको प्रतिक्रिया स्पष्ट थियो: "उबुन्टु लोकतन्त्र होइन।" कुनै तरीका छैन: प्रयोगकर्ताहरू ध्यानमा राख्न चाहन्छन्, यसैले उबुन्टुले ठूलो मूल्य तिरेको छ: विन्डोजको बायाँपट्टि बटनहरू, अपरिपक्व एकता पूर्वनिर्धारित रूपमा र मलाई के थाहा छैन। अलविदा उबन्टु! स्वागतम, लिनक्स टकसाल!
Say time पहिलो पटक »तपाईले भन्नु हुन्छ?
यदि तपाईंले अप्रिलमा घोषणा गर्नुभयो कि टकसालले आफूलाई पहिलो स्थानमा राख्यो।
म तपाईंलाई KZKGGaara जस्तै बताउँछु। त्यो अवसरमा त्यो लामो समयको लागि थिएन। यदि यो "पहिलो पटक" हो भने लिनक्स मिन्टले उबन्टुलाई U महिना भन्दा बढीको लागि सुपरिडेस गर्दछ।
लिनक्स टकसाल नयाँ उबन्टु हो